Isan-kariva, any an-tanàn-dehibe iray any Afrika, dia mitantara tantara ao amin’ny Baiboly amin’ireo ankizy mirenireny ity mpitsabo mpanampy. Avy eo dia omena sakafo tsotsotra izy ireo. Fa nankaiza kosa i Paki androany? Nahoana izy no tsy miara-mipetraka amin’ny ankizy sasany manodidina ny afo? Omaly izy dia nangalatra voasary tao an-jaridainan’ny hôpitaly, ka naratra ny tongony raha izy nananika ny fefy iny. Angamba hitan’ilay mpitsabo mpanampy izy? Koa nipetraka lavidavitra kokoa izy androany hariva, tao ambadika hazo iray, ary teo no nihaino ny tantara ao amin’ny Baiboly. Nefa mba tena tiany tokoa ny hipetraka eny amin’ny mazava sy hafanain’ny afo!
Tapitra ny tantara. Taterina avy any an-dakozia ny lovia misy vary mbola midonaka. Mazoto homana er&ygrave; ny ankizy. Fa i Paki kosa miady saina. Hatramin’ny nangalarany ireo voasary, dia tsy nanan-kohanina intsony izy. Ka hijanona ho mosarena ao anaty haizina ve, sa hanandrana handroso eny amin’ny mazava? Rehefa avy niady saina vetivety izy, dia nitsangana ka nandringaringa nanatona ny afo.
«Avia haingana, ry Paki, fa efa ho lany ny sakafo», hoy ilay mpitsabo mpanampy, niantso azy sy nanolotra lovia nisy vary.
Rehefa lasa ny ankizy sasany, dia notantanany i Paki, notsaboiny ny tongony naratra, ary niresaka taminy izy. Nanontaniany ny antony nampaharatra azy, ka indro i Paki fa nivaky hoe nangalatra. Ho valin’izany, dia namela ny fahadisoany tamin’ny fony manontolo ilay mpitsabo mpanampy, ka falifaly er&ygrave; i Paki niala teo amin’ny hôpitaly. Izao no zavatra nianarany: hita avokoa ny fahotana rehetra, eo amin’ny mazava, kanefa eo koa izy ireo no afaka ho voavela. Soa ihany izy fa tsy nijanona tao amin’ny maizina!
“Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy (Andriamanitra) ka mamela ny fahotantsika” (1 Jaona 1:9).